Kupisa kunzwa mukati mehuro
Chero zvinetso nehuro zvinopa muridzi wavo dambudziko rakawanda. Nemhaka yekupisa mumutsipa, somuenzaniso, zvinorwadzisa kutaura, hazvishamisi kudya, uye kunyange pazororo, kunetseka kunonzwika. Nokuda kwedambudziko iri, munhu anogumbuka uye anononoka. Asi zvakakosha kurwisana kwete kwete chete kugadzirisa pfungwa. Kupisa kunogona kuratidzira zvimwe zvirwere zvakakomba, izvo zvehutano zvakanyanya kutyisidzira.
Zvinokonzera kutsva kunzwa mumutsipa
Kazhinji kacho chinokonzera dambudziko ndiko kunetseka. Inoratidzika apo gastric juice inowanikwa mu mucosa wepopu, inokonzera kutsamwa. Ichi kukuvara kunogona kuenzaniswa nekupisa. Ichokwadi ndechokuti mucosa weeophagus haina neutachiona pH yezinga, uye asiriya, kunyange mumaduku maduku, anokurumidza kuipisa. Nyaya yakawanda inowanikwa mu mucosa, yakadzika ichava iko kutsva, uye zvakakodzera, zvinonyanya kushamisa zvinonzwa zvinofanira kuitika.
Kukurudzira chimiro chekutsva kunzwa mumutsipa kunogona kuva chikafu chisina kukodzera. Kazhinji kacho kubva pakusagadzikana mumutsipa vanhu vanotambudzika, vachirara pafivha, muto, wakapinza, uyewo munyu uye zvokudya zvakakora. Inokurudzira kurwisa kwepfungwa pasi pesimba uye kupisa kunopisa, chingwa chine mutsva uye tomato juice.
Dzimwe nguva zvinokonzera kupisa mumutsipa zvirwere. Zvirwere zvinotyisa zvinotarisa seizvi:
diffuse goiter ;
kushungurudza (mukuratidzika kwaro kwetsika);
zvirwere zvakasiyana-siyana zve ENT.
Kushatirwa kunogona kukonzerwa nefungi uye zvirwere. Munharaunda yengozi vanhu vanobata mumamiriro ezvinhu akaipa, nguva dzose vachibatana nezvinhu zvinokuvadza. Zvakaipa kumamiriro ehutachiona hunoita kuti utsi hwefodya huve, saka hunopisa nekunzwa kunopisa mumeso ehuro apo kazhinji vanhu vanotungamirira mararamiro akanaka.
Kushungurudza zvakaoma uye kusuruvara kusingafadzi mumutsipa kunowanzozivikanwa kuvanhu vanowanzowanzofanira kutaura kana kuimba. Mune zvimwe zviitiko, kupisa kunokonzera kukanganisika kwepfungwa.
Kana kupisa kunopisa mumutsipa kuchioneka mushure mekudya, zvichida iwe une reflux esophagitis. Muchiitiko ichi, murwere anowanikwawo ne hiccups, kukanganisa uye kazhinji kuora mwoyo.
Sezvaunogona kuona, kune zvakawanda zvinokonzera zvinokonzera. Uye kana vamwe vavo vachigona kuparara nyore nyore ivo pachavo, vamwe vanoda kubatsirwe kwehutano uye zvakanyanya kurapwa.
Kurapa kwekupisa mumutsipa
Ichokwadi kuti, kubvisa dambudziko racho kamwechete kwenguva dzose, unofanirwa kuongororwa zvakakwana uye nekunyatsoziva chikonzero chechirwere chacho. Iwe unogona kumisa kubatwa nekubatsirwa kwezvinoreva zvinofanira kuva mumusha chero upi zvake.
Iyo mishonga yakanakisisa yekushushikana kwepfungwa, iyo inobatsira uye nekunzwa kunopisa mumutsipa, mvura ine soda. Dissolve teaspoon ye soda mugirazi remvura uye unwe muchanganidzi mune imwe gulp. Kusagadzikana kunonyangarika mushure memaminetsi mashomanana mushure mekugamuchira.
Zvakanaka kana imba ine maarumondi. Batanidza marangi nemvura inopisa kuitira kuti vabvise ganda. Verengai zvakanaka musati madya.
Zvakanaka kubva kumoto unopisa kunobatsira kugadzirisa uchi. Kunaka kunogona kuparara nemvura kana kungoita girazi remvura.
A chamomile muto inokonzera muviri.
Munguva yekurwiswa, kushandiswa kwemarasha kuchabatsira.
Iyo yepamusoro mishonga inorevei inopesana nekupisa kukuru mumutsipa ndeyi:
Gaviscon uye mamwe antacids .
Kuti urege kudzivirirwa mune ramangwana, edza kuongororazve kudya kwako, kuti uone humidification yemhepo mune imwe nzvimbo yaunogara iwe. Apo huroti haritapore, edza kudya zvokudya zvinyoro uye zvinodziya chete. Munguva yekudzorera nguva, hazvikurudzirwi kutaura zvakawanda.
Kurapa kweArthrosis yemabvi akabatanidzwa ne2 degrees
Homeopathy Hypericum - zviratidzo zvekushandiswa
Nzira yekutora sei Furosemide?
Musoro pamusoro - izvo zvinokonzera
Omeprazole - chii chinoporesa, kutora sei?
Allergy kusvika kupolene
Cerebrolysin - zviratidzo zvekushandiswa
Mwoyo unorwadza nehuro
E. coli mumuguta
25 uchapupu hunokosha hwokuti chinhu chikuru mumufananidzo ndicho chitubu!
Shish kebab kubva kune inguruve mune ganda rinopisa
Dhairrhea mukuderedza chironga - kurapa kumba
Uchi nejeri royal
Midziyo Salvatore Ferragamo
ChiJapan chin - kutarisira uye zviripo
Zviratidzo kuna Petro naPauro
Ndeipi mifananidzo yakanakisisa yekamuri yekurara?
Johnny Depp naLoberto DiCaprio
Oranges panguva yekuzvitakura
Nanny for the Pope: 9 nyota varume vakarara nevadzidzisi vevana vavo!
Dombo riri murereter - zviratidzo
Taurus uye Sagittarius - kuwirirana muhupenyu hwose
Nzira yekukanganisa musanganisi wechando?
Kuchengetedzwa kwekando pakuzvitakura - 2 trimester